‘Nandresy ny Fitiavana Androany Satria’ Notsipahin’ny Fitsarana Indoneziana Ny Fitakiana Hanamelohana Ny Firaisan’ny Samy Lahy sy Samy Vavy · Global Voices teny Malagasy
Fandresena kely ho an'ny fiarahamonina LGBT Indoneziana izany
Voadika ny 05 Janoary 2018 8:14 GMT
Lalao scrablbe LGBT. Pixabay. CC0.
Nolavin'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana Indoneziana (Mahkamah Konstitusional na MK) ny fangatahan'ny vondrona Islamika mpandala ny nentim-paharazana mba handràra ny firaisana ivelan'ny fanambadiana sy ny firaisana ara-nofo eo amin'ny samy lahy na samy vavy.
Mihevitra ireo mpikatroka fa mikendry hanenjika ny vondrom-piarahamonina lesbiana, pelaka, ireo manana taovam-pananahana roa samihafa sy ireo nanova taovam-pananahana (LGBT) ny tolo-kevitra hanova ny andinin-dalàna ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Indoneziana (KUHP).
Napetraky ny Fikambanan'ny Love Family (AILA) ny fitakiana izay nangataka ny fitsarana mba hanao fanadihadiana ara-pitsarana ny Andininy faha-284 (firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana), ny Andininy faha-285 (fanolanana) ary ny andininy faha-292 (pedofilia).
Maniry ny vondrona mba ho raisin'ny lalàna ho fanolanana ny firaisana ara-nofon'ny samy lahy na samy vavy. Te hampiditra sazy ho an'ireo zaza tsy ampy taona manao firaisana ara-nofo mialoha ihany koa ny vondrona. Amin'ny ankapobeny, nangataka mba handràra ny firaisana ara-nofo rehetra ivelan'ny fanambadian'ny lahy sy vavy ny vondrona mpandala ny nentin-drazana . Tsy ankatoavina any Indonezia ny fanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana amin'izao fotoana izao.
Vato dimy manohitra ny efatra, nolavin’ ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana momba ny lalàm-panorenana ny fitakiana satria nanolo-kevitra hamorona lalàna vaovao izay tsy fahefan'ny fitsarana ny AILA. Nilaza ny ankamaroany fa tokony halefa any amin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ny lohahevitra resahana ao anatin'ny fitakiana.
Indonezia, firenena be mponina Miozolomana indrindra, dia fanjakana lahika izay miaro ny fomba fijery tony fihevitra sy fihetsika amin'ny fandraisana sy fampiharana ny fampianarana silamo. Na dia izany aza, niha-nitombo ny Miozolomana mpandala ny nentin-drazana tao anatin'ny taona vitsy. Nampitandrina ny tatitra iray avy amin'ny Front Line Defenders fa tsy mitsahatra miatrika fanafihana ao amin'ny firenena ireo mpiaro ny zon'ny LGBT.
Ny AILA dia tarihan'i Bachtiar Nasir, mpitondra fivavahana hiringiriny izay nahomby tamin'ny fitarihana fanentanana ho fanesorana ny governoran'i Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) rehefa voampanga ho tsy manaja ny silamo ity governora ity. Jakarta no renivohitr'i Indonezia.
Notsikerain'ireo mpikatroka sasany ho mampiely fankahalàna vondrona vitsy an'isa any Indonezia, tahaka ny vondrom-piarahamonina LGBT i Nasir. Tamin'ny herintaona, voasaringotra tamin'ny raharaha fanadiovam-bola misy ifandraisany amin'ny milisy ISIS izy, saingy mbola tsy voamarin'ny polisy izany.
Nankatoa ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tahaka ny fandresena ho an'ny zon'ny LGBT ireo mpampiasa Twitter sasany :
Misaotra ireo dimy tao amin'ny Fitsarana Tampony izay nanakana ny ezaka hafa hanenjika ny vahoaka LGBT ao Indonezia. Mbola tsy vita ny ady ataontsika ho amin'ny fitovian-jpo, fa androany, nandresy ny fitiavana.
Tsy heloka ny Lgbt. nanao zavatra mamy mahatalanjona ianao i Indonezia.
Tsy manohana ny LGBT aho, saingy tsy mihevitra aho fa tokony hanameloka izany i Indonezia. Faly amin'ny fandresenareo aho. Resaka fiainana manokana izany, tahaka ny hevitro. Arahabaina!
Vaovao hafa, nilaza ihany izy ireo nony farany hoe TSY manaiky ny fanamelohana ny lgbt sy ny fifandraisana ara-nofo rehetra ivelan'ny fanambadiana. 5 tamin'ireo sivy no nanao tsia. Na dia manamaivana aza izany, dia mbola zavatra mendrika ny hodinihanao amin'ny ho avy.
Arahabaina Indonezia noho ny fanapahan-kevitr'izy ireo lehibe tsy hanameloka ny LGBT sy ny firaisana ivelan'ny fanambadiana! Dingana lehibe ho an'ny LGBT rehetra!
Saingy ny sasany kosa mahita ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tahaka ny fahotàna izay tsy hitarika afa-tsy voka-dratsy goavana:
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny MK mba hanaiky ny LGBT, ny fiarahana mipetraka ivelan'ny fanambadiana, sy ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana (zina), tokony hiomana amin'ny loza i Indonezia noho ireo mpitarikantsika lozabe. Manana fahafinaretana amin'ny famaizan'ny Tsitoha.
Ny 15 Desambra, namely tao Java Andrefana sy Afovoany ny horohorontany mahery vaika. Nanome tsiny ny fanapahan-kevitry ny fitsarana mankatoa ny LGBT ho antony nahatonga izany loza izany ny sasany tamin'ireo mpandala ny nentin-drazana. Haingana avy hatrany ireo mpampiasa Twitter sasany nanakiana ny kabarim-pankahalàna:
Nisy horohoron-tany nitranga tany Java ary nanome tsiny ireo Miozolomana mpandala ny nentin-drazana fa noho ny ezaka tsy nahomby amin'ny fanamelohana ny LGBT sy ireo maniry hanao firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana no anton'ny loza. Nampiasa ny teny hoe “mankatoa ny LGBT” izy ireo hanelezana fankahalana.
Toa nilaza ireo mpanakiana fa ny “OMG LGBT no nahatonga ny horohorontany”, “DWP [iray amin'ireo fetiben'ny mozika sy dihy lehibe indrindra ao Indonezia] no nahatonga ny horohorontany”. Ry zalahy, tsy nilaza taminareo ve ny mpampianatra anareo fa hetsika hovitrovitry ny tany mitranga noho ny fikisahan'ny takelaky ny tany ny horohorontany? Mihevitra aho fa tsy mampianatra izany karazan-javatra izany tany amin'ny sekolin'ny tery saina izy ireo.
Ho an'ireo adala izay mampifandray ny loza voajanahary amin'ny hetsika ataon'ny olombelona toy ny fanapaha-kevitry ny MK momba ny LGBT na DWP, ity ny lisitry ny horohorontany ambonin'ny 6 amin'ny maridrefy Richter izay nitranga tany Indonezia tamin'ny herintaona. Azafady, lanjalanjao ny fanambaranao feno hadalana.
Nampanantena ny AILA fa hanohy ny iraka ataony hanohana izay antsoiny hoe soatoavin'ny fianakaviana ao Indonezia. Fanamby ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBT sy ireo olom-pirenena voakasika izany mba ho mailo hatrany ary hanohitra ny fitomboan'ny fandalàna ny nentin-drazana ao amin'ny fanjakam-birao Indoneziana.